Kuza kube yimhla, i-market for the sales of kids's toys ihluke kakhulu, ukusuka kwizinto ezincinci (ezilula) ukuya kwi-high-tech, umzekelo, iirobhothi. Ukuba wena ngokwakho awukwazi ukuba yiyiphi into yokuzonwabisa efunekayo kubantwana, ngoko ke unokunceda abacebisi bezentengiso okanye oogqirha bezilwanyana. Kulo lonke ixesha lomntwana kukho ukudlala okuhlukeneyo, ukuzonwabisa, kodwa bonke bafuna ukuzonwabisa, ukuphuhlisa nokuzonwabisa.
Xa ukhetha umdlalo wezemidlalo, umntwana uvela kwiinyanga ezi-6 ukuya kunyaka, kufuneka uqwalasele umbala, ubukhulu, izinto ezizenziweyo, umzobo weetekisi, ngokukhethekileyo ukuba umdlalo uza kuba ngumculo. Xa ukhetha umdlalo, kufuneka uqikelele ngenyameko, kwaye ukuba kunokwenzeka, thintela ukuba ayikho imichilo, izitshixo, izinto ezinobungozi kuwo, ngamanye amazwi, kufuneka kube lula. Kule minyaka yobudala umntwana eqala ukuqhelanisa nezinto ezingapheliyo ezizungezile.
Xa unyaka ukususela kunyaka ukuya kwiintathu, sincoma ukuba uthenge amathoyizi ngendlela yamanani ejometri, i-rhombuses, ii cubes, njl. Idoli yokumbamba, umshini wokubhala, isethi yesihlabathi, izitya zokudlala, idonsa, iibhola ziya kuba zikhula kakhulu kwaye zinomdla kubo bonke abantwana, kungakhathaliseki ukuba isini. Ncedisa umntwana ukuba akhe ipiramidi, achaze kwaye abonise indlela eya kuzinzisa ngayo kwaye kutheni. Zama ukuqokelela ndawonye umzobo ovela kwiipuzzle ezinkulu okanye izinto eziphathekayo.
Xa uneminyaka emithathu ukuya kwemihlanu ubudala, abantwana baqala ukucinga ngokudlala imidlalo kunye namathoyizi, banomdla, bayakha imeko yomdlalo. Kubaluleke kakhulu kwiimeko ezinjalo apho umntwana engadlala yedwa, kuyinqweneleka ukuba uya kuba noontanga naye okanye udlala naye. Imidlalo kwi-sandbox iya kuba yasebenza ngakumbi kuneminyaka emncinci, makumvumele umntwana adlale ngamanzi, agibele nge-swing, kwiibhasikidi ezintathu okanye ezine. Thenga umbala, iplastiki, iphepha elinemibala kwaye usebenze kunye nobuchule bomntwana, vumela umntwana afike emanzi, ungamgxululi, akafanele ukwesaba ukuchitha amanzi okanye ukugubha etafileni yepeyinti, ungamphazamisi umntwana kwinkqubo yokudala. Ukuthenga umzila, abafana kunye namantombazana abathanda kakhulu, ukufudumala akukuvumeli kuphela umdla kumntwana, kodwa kuhlakulela ukucinga kunye nolwazi kwi-physics. Kuya kuba yinto enhle, kule minyaka ukuthenga umntwana iirejista yemali yokudlala (njengokwesitolo), umntwana uya kuthengisa yonke into, ngaloo ndlela azuze iziseko kwizorhwebo nakushishino.
Enyanisweni, xa uneminyaka emihlanu ukuya kwiminyaka eyisixhenxe, abantwana ekukhethweni kwamathoyizi baqala ukugqithisa, umdla wabo ukhula kakhulu. Kumagumbi okuzonwabisa kufuneka ube nenyulo enkulu yamodoli, ngokuqinisekileyo kunye neengubo ezahlukeneyo, izitya, izindlu. Kuyaba umdla kumntwana ukuba adlale nodokotela, udokotela wamazinyo, ngenxa yoko, thengisa iisethi ezixelisa izixhobo zokugada, ukuzenza sengathi uyagula, vumela ugqirha wakho omncinci ukuba akugcine. Amantombazana kule minyaka anentshisekelo enkulu kwiimveliso zezimonyo, ukuba agweme izenzo "zokuphazamiseka" kweendlela zokuzongela abantu abadala, kuyafaneleka ukuthenga umntwana, ngokungafani nabantu abadala, ukhuselekile, unobumba obuncinane kunye namaqhumiso. Ngokuqhelekileyo, asiyi kufihla into yokuba abafana bayanomdla kwizonyuliso, bayifake i-cilia kunye ne-cilia ethule. Ukuphuhlisa imidlalo kule minyaka ikwaxutyushwa ukuba iinguqu zokudlala, ikhompyutha yabantwana, i-kite, ii-airplan kwi-redio, i-scooters, imidlalo yeetheyibhile yabantwana njengabantwana bama-dominoes, umphathi. Ekubeni phantse phantse yonke intsapho ekhoyo enekhompyutheni, kwaye umntwana ucela ukudlala, mbeke umdlalo ojolise ekuphuhliseni imemori, ukuchaneka kunye neengcamango, imidlalo enjalo, njengomthetho, akufanele isetyenziswe ngaphezu kwemizuzu engama-20 ngosuku.
Amathoyizi ekuphuhliseni izakhono ezincinci zezithuthi kubantwana
Iinkomfa: ukukhuliswa kunye nophuhliso lomntwana
Indlela yokufundisa umntwana ukuba athethe ngokuchanekileyo?
Iikhikhi zeKrisimesi kunye neziqhamo kunye namantongomane
Isilungiso samadoda kwi-rheumatism kunye nentlungu edibeneyo
I-Cottage cheese pies